Sport Products :: Others Sports Related :: [Quechua] ARPENAZ 10 BACKPACK
Home/Sport Products/Others Sports Related/[Quechua] ARPENAZ 10 BACKPACK
[Quechua] ARPENAZ 10 BACKPACK
Color : Black Yellow/Blue Pink Blue Red/Grey Mint Grey/Green Blue/Purple
Minimum quantity for "[Quechua] ARPENAZ 10 BACKPACK" is 1.
2. 10-YEAR GUARANTEE
3. ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS
Oxylane and Quechua have decided to inform you of the environmental impact of its hiking backpacks over their entire lifespan. This work follows an experiment that began in July 2011 with the French Ministry of Ecology. Scores ranging from A to E were awarded based on comparisons between Quechua's backpacks only. Details on this project and the calculation methods used are available at http://www.oxylane.com/20/demarche-environnemental...
VOLUME -10 L
COMFORT -Simple foam-padded back
WATER BLADDER- Not Compatible
Quechua ကျောပိုးအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Technical ပိုင်းအတွက် ၁၀ နှစ်ထိ အာမခံပေးထားပြီး Hiking လုပ်ဖို့နဲ့ Trekking သွားဖို့ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
ပစ္စည်းအတွက် ၁၀၀ % အစစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါတယ်။ အိမ်ရက်ငွေချေစနစ် ဖြင့်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်
Quechua ကြောပိုးအိတျဖွဈပါတယျ။ Technical ပိုငျးအတှကျ ၁၀ နှဈထိ အာမခံပေးထားပွီး Hiking လုပျဖို့နဲ့ Trekking သှားဖို့ အတှကျ အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။
ပစ်စညျးအတှကျ ၁၀၀ % အစဈဖွဈကွောငျးအာမခံပါတယျ။ အိမျရကျငှခေစြေနဈ ဖွငျ့ဝယျယူလို့ရပါတယျ